ထုတ်ကုန်များ > 6-Bromoquinazolin-2(1H)-one (79885-37-3)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
အဓိပ်ပါယျတူစကား ·2(1H) -Quinazolinone, 6-bromo-
မော်လီကျူးအလေးချိန်ဂရမ် / mol 225.045
IUPAC name ကို 6-bromo-1,2-dihydroquinazolin-2-One
ဓာတုနာမကိုအမှီ 6-bromoquinazolin-2 (1H) -one
အဘယ်သူမျှမ CAS 79885-37-3
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 6-Bromoquinazolin-2(1H)-one (79885-37-3)
သင်သည်မည်သည့်ဓာတုဝယ်ဖို့ရှာကြသည်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, APICMO သငျသညျဖုံးအုပျတယ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး synthesize ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်များသည့် Good Manufacturing Practice (CGMP) နှင့်အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်လျော။ ကျနော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်မှာအရည်အသွေးအစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူသငျသညျပေးတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one ရှေ့ပြေးခြင်းနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းထုတ်ကုန်
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ မတည်ငြိမ်မှုများအတွက်အခြေအနေများပါဝင်သည်
compound Canonized ဖြစ်ပါတယ် စစ်မှန်သော
XLogP3-AA ကို 1.4
အတိအကျ Mass g / mol 223.959
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADcYBzIAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwQ
ဒါဟာတာရှညျခံ, ပေါ်လီမာ, ချေး inhibitor အဖြစ်နှင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
သူနဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ် 6-Bromoquinazolin-2(1H)-one (79885-37-3)
အဆိပ်အတောက်အငွေ့ရှူရှိုက်နေကြကြောင်းထံမှသင်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (respiration, တစုံတရာပေးနှင့်မျက်နှာဖုံးများ) ။ မြေမှုန့်, ​​ခိုးအငွေ့သို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့ကိုရှူရှိုက်မထားပါနဲ့။
အကာအကွယ်ဂီယာ (ဘွတ်ဖိနပ်, ခါးစညျးရှေ့ဖုံးများနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ဖိနပ်) အရေကိုချွတ်။ ဓာတုနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာလျက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
မျက်နှာ / မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး, မကျြနှာကိုဒိုင်း) သင်၏မျက်နှာကိုသို့မဟုတ်မျက်စိပေါ်ဓာတု splash ကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
သင်သည်သင်၏စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်အဖြစ်မည်သည့်အသားအရေအဆက်အသွယ်ကနေသင့်လက်ကိုကာကွယ်ရန်လက်စွဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (လက်အိတ်) ။
အလုပ်လုပ်ဧရိယာအတွင်းလေဝင်လေထွက်လုံလောက်သောမပါရှိလျှင်, လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေ (ဒေသခံအိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်) ကိုသုံးပါ။
ဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းအငွေ့ကိုတစုံတရာသို့မဟုတ်ဗီဒိုကို အသုံးပြု. ထုတ်လွှတ်အရင်းအမြစ်ခိုင်ခံ့။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one သင့်ရဲ့အရေပြားရရှိသွားတဲ့လျှင်သင်အောက်ပါလက္ခဏာတွေရှိစေခြင်းငှါ:
သင်ဤသတိထားမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကဓါတုဗေဒနဲ့အဆက်အသွယ်သို့ရောက်လျှင်, သင်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစား immediatelyremove သငျ့သညျ။ ရေအများကြီးနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ဆပ်ပြာနှင့်အတူဧရိယာကိုရှင်းလင်း။ ကိစ္စတွင်ခုနှစ်တွင်ယားယံဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာဆက်ရှိနေသေး။
မျိုချမိပါခဲ့လျှင်ရေနှင့်သင်၏နှုတ်ထွက်ဆေးကြောပါ။ သငျသညျအန်သွေးဆောင်ဖို့မကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆရာဝန်တစ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
သငျသညျ 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) ရှူလျှင်သင်အောက်ပါလက္ခဏာတွေရှိစေခြင်းငှါ:
အမှု၌သင်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအကူအညီပေးခြင်း, သူ / သူမလတ်ဆတ်သောလေထုကိုရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုအခက်အခဲမရှိဘဲရှူဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အဆင်ပြေအနေအထား၌ထိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်ရှိရာအရပ်အပြင်ဘက်တွင်သားကောင်ရနေကြသည်။ သားကောင်အသက်ရှုမထားလျှင်, သူတို့ကိုအတုအသက်ရှူပေးပါနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာကြာလော့။
သင်၏မျက်စိသည်ဤဓာတုထိတွေ့ရ အကယ်. သင်ကအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာရှိစေခြင်းငှါ:
သင်၏မျက်စိသည်ဤဓာတုမှထိတွေ့လာရလျှင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လျှင်ချက်ချင်းမျက်ကပ်မှန်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ 15 မိနစ်နိမ့်ဆုံးရေများများနှင့်အတူသတိသင်၏မျက်စိဆေး။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးပါက, ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
4. 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ
သင်အဆိပ်နိုင်သောကြောင့်, စား, ဆေးလိပ်, သို့မဟုတ်ဤဓာတုကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာသောက်သုံးခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကြောင့်ရေနှင့်ယင်း၏တုံ့ပြန်မှုဖို့ဓာတုရေမထည့်ရပါဘူး။ ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်သန့်ရှင်းရေးအစီအမံများနှင့်အတူလိုက်လျော။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်ကစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခိုးအငွေ့ / အခိုးအငွေ့ကိုရှူရှိုက်မထားပါနဲ့။ သငျသညျအနီးအနားရှိ emergency.It ၏အမှု၌လုံခြုံရေးရေချိုးခန်းနှင့် eyewash ရှိသည်သေချာမတော်တဆမှုဖြစ်ပျက်မှု၌ပေးထားသောတစ်ဦးအမြန် responseis သေချာပါလိမ့်မယ်။ spillage ဖြစ်ပေါ်မှု၌သင်တို့ကိုရှေ့တော်အပေါ် spillage ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းကွန်တိန်နာကောင်းစွာဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်သဟဇာတတ္ထုများနှင့်အတူဓာတုဖော်စပ်ကိုရှောင်ကြဉ်ကြသည်သေချာအောင်သင့်ပါတယ်။
5. 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဒီဓာတုကိုင်တွယ်ပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုရှင်းလင်း။ ဒါဟာမဆိုအန္တရာယ်, iethrough စားသုံးမိရှောင်ရှားကူညီပေးသည်။ ကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင့်အကာအကွယ်ဂီယာဖယ်ရှားပြီးထပ်ကဝတ်ထားသို့မဟုတ်ပယ်ရှေ့မှာသန့်ရှင်းရေး။ သငျသညျ reaction.It မဆိုစွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်ဟုသန့်ရှင်းသော thesurface ကြမ်းပြင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဧရိယာမှန်မှန်အဘယ်သူမျှမယိုဖိတ်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီကွန်တိန်နာများ occurred.Dispose နှင့်အခြားဓာတုစွန့်ပစ်ထားသည်ကိုပင်လျှင်သန့်ရှင်းသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
သငျသညျတင်းကျပ်စွာပြိုကွဲသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမဆို spillage ကိုရှောင်ရှားရန်သိုလှောင်မှုကိုကွန်တိန်နာတံဆိပ်ခတ်ထားသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်ဓာတုင်သည့်ကွန်တိန်နာနေရာမပေးပါဘူးဆိုတာသေချာချွတ်ခေါက်ခံရရှောင်ရှားရန်ထိပ်ဆုံးမှ။ အဆိုပါကွန်တိန်နာကောင်းစွာပိုမိုလွယ်ကူဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ရပါမည်။ မည်သည့်မတော်တဆမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့အခွင့်မရှိပါသူတွေကိုပယ်ထားပါ။ လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရှိကြောင်းတစ်ဦးအေးမြဧရိယာထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမဆိုတုံ့ပြန်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဝေးမဆိုသဟဇာတတ္ထုများထဲကနေသူတို့ကိုချထားပါ။
7. 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) ကိုင်တွယ်နှင့်သိုလှောင်
ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမဆိုမတော်တဆမှုမှအစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်ဓာတု exposure.Keep အနီးရှိရရှိနိုင်ပါပထမဦးဆုံးအကူအညီပစ္စည်းကိရိယာများထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးရန် mask, မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး, ခါးစညျးရှေ့ဖုံး: မှန်မှန်ကန်ကန်အပေါငျးတို့သကာကွယ်မှုဂီယာကိုသုံးပါ။ ဒါဟာအငွေ့နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထိတွေ့ခံရခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်အငွေ့အခန်း eyewash ယူနစ်နှင့်လုံခြုံမှု showers.Work ပါဝင်နိုင်သည်။ အခန်းထဲမှာအငွေ့၏စုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချဖို့လုံလောက်တဲ့လေဝင်လေထွက်နှင့်အတူအခန်းတခန်းထဲမှာဓာတုကိုင်တွယ်။
တင်းကျပ်စွာအဖြစ်သို့အခါရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းအငွေ့၏တုံ့ပြန်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နှင့် "အနံ့" ပြဿနာတွေလျှော့ချဖို့တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားပါ။ spillage ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရော်ဘာဖော့ဆို့သုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်ဧရိယာထဲမှာချထားပါ။ ကတုံ့ပြန်စခွေငျးငှါအဖြစ်အစိုဓာတ်ကနေကွယ်ပျောက်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပိုမိုလွယ်ကူဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက် allthe သိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာတံဆိပ်ကပ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဝေးနေတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါထိုကဲ့သို့သောအားကောင်းတဲ့ဓာတ်တိုးအေးဂျင့် andinflammable ထုတ်ကုန်အဖြစ်မဆိုသဟဇာတတ္ထုများအနေဖြင့်ဓာတုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လုံလောက်သောလုံခြုံရေးအခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူတွေကိုဒီဓာတု၏ access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ပေးထားရပါမည်။
8။ 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (79885-37-3) မတော်တဆအစီအမံ
အသေးစား spill- ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါက, စွန့်ပစ်ဘို့အဆင်သင့်တဲ့ကွန်တိန်နာသို့ဖိတ်စင်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းဖြစ်လျှင်, လိုအပ်သော tools တွေ (သင်လည်း vermiculite သို့မဟုတ်သဲတွေနဲ့ဓာတုပစ္စည်းရောထွေးနိုင်) ကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါကြောင့်အဲဒီလိုများနှင့်ကွန်တိန်နာသို့ရေလာပြီရှောင်ရှားရန်အန္တရာယ်များမပါလျှင်ကြီးမားသောအဆိုပါယိုစိမ့်ယိုဖိတ်-Stop ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့ချဖို့ရဆေိုးသို့ရတဲ့အထဲကယိုဖိတ်မှုတားဆီး။ အငွေ့ပမာဏကိုလျှော့ချဖို့, တစ်ရေမှုန်ရေမွှားကိုအသုံးပြုပါ။ ကလက်မှရရှိသွားတဲ့လျှင်သင်ကယိုဖိတ်မှုဆံ့ဖို့အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
အမှု၌မီးကိုအောက်ပါ extinguishing မီဒီယာကိုအသုံးပေါ်ပေါက်:
အပြည့်အဝရေ jet.Once လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်အတူရေသုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ, အဆိပ်အတောက် fumes.Firefighters ၏ထုတ်လွှတ်ထို့ကြောင့်အရေပြားနှင့်မျက်လုံးများနှင့်အဆက်အသွယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်အသက်ရှူကိရိယာများနှင့်အကာအကွယ်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်ရှိသေး၏။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one ဖန်၏ရှေ့တော်၌ Non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ဓာတ်အေးဂျင့်များနှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်တစ်ချိန်ကအဆိပ်အငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါ။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one အားလုံးဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူကိုလိုက်နာရမည်။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one(79885-37-3)အမြောက်အများသာသနာကိုနှင့်စျေးနှုန်းအချက်အလက်
ဒီဓာတု၏သေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ဖြစ်ကြသည်။ စျေးနှုန်းနှင့်သာသနာကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အော်ဂဲနစ် ChemistryVol.E 9b /2၏ Houben-Weyl နည်းလမ်းများ, 4thErnst Schaumann, စာမျက်နှာ 110 တည်းဖြတ် Edition ကိုဖြည့်စွက်။
ဓာတုဗေဒအိန္ဒိယဂျာနယ်: အော်ဂဲနစ်အပါအဝင်ဆေးဖက်ဝင်, အတှဲ 42, သိပ္ပံနဲ့ & စက်မှုသုတေသန 2003 ၏ကောင်စီ, စာမျက်နှာ 1981 ။
Synthesis ၏သိပ္ပံ: Molecular Transformer, Yoshinori Yamamoto, အတှဲ 16 ၏ Houben-Weyl နည်းလမ်းများ, စာမျက်နှာ9။